I-Holland | Itafile yeSayensi | Vuselela iMveliso
Iingxaki zokwenza ithebhulethi zinokwenzeka ngeendlela ezininzi kwaye zikhokelele ekuphumeni kwamaxesha eendaba. Apha ngezantsi sijonga imicimbi emithathu eqhelekileyo kunye nezisombululo zazo ezinokubakho. Mininzi eminye imiceli mngeni enokufuna ukusonjululwa ke nceda uqhagamshelane nathi ukuba yeyakho ayigutyungelwanga apha kwaye masikuncede ukonyuse imveliso yakho.
Mhlawumbi owona mceli mngeni mkhulu wemveliso abajongane nabavelisi bethebhulethi namhlanje, ukunamathela kulapho i-granulation inamathela khona kwi-punch tip yobuso ibangela inkcitho enkulu, isivuno esincitshisiweyo kunye nokufumana ixesha lokushicilelwa okungafunekiyo.
UkuCoca kunye nokuLaminisha
Ukwahlula phakathi kweLaminar ngaphakathi kwecwecwe lomzimba okanye ukususwa kwendebe ephezulu yethebhulethi kunokwenzeka nangaliphi na ixesha ngexesha lokudibana kwethebhulethi okanye nayiphi na enye indlela esezantsi yeenkqubo ezibangela iitafile ezingaqhelekanga kunye nabathengi abangonwabanga.
Ukuveza iingxaki ezingcolisayo kungunobangela wokuphinda umgangatho kunye nezivuno eziphantsi. Ungcoliseko luhlala luzibonakalisa luhlobo lwamabala amnyama okanye imigangatho yendawo yemoto. Ukubonakala ngokucacileyo kwemveliso kubalulekile ekuboneni komsebenzisi wokugqibela kwaye ikhuthaza ukuthembeka kwe-brand.
Ngaba ufuna i-TSAR≈PREDICT yasimahla? Dibana no.
Ingxaki enzima njengokunamathela ifuna isisombululo. I-Holland inoluhlu olukhulu kakhulu lwezinto zokuphahla kunye nezigqoko zokufa kwimarike eyenzelwe ukuhlangabezana nemiceli mingeni phantse kwayo nayiphi na indlela. Xa sidityaniswa nemodeli yethu eyahlukileyo ye-TSAR ~ Predict, sinokusombulula nezona meko ziqinisekileyo.
Imfutho kunye neNdebe yeNdebe
Isisombululo esinye sokungcoliseka kukusebenzisa iintsimbi okanye iindebe ezidibeneyo ngokudibeneyo kwi-punch yethebhulethi. Oku kuya kuthintela i-oyile ukuba ingangeni kwimveliso egqityiweyo.
Ukutsala kunye nokulila kunokubangelwa zizinto ezininzi kodwa isisombululo esinye esinokubakho kukusebenzisa izixhobo ezinobuchule bokuhambisa iitawuli ukunqanda ukukhala okufayo kunye nokuvumela amandla aphezulu eendaba kunye nokuphucula ukuxhathisa ukunxiba ngokubanzi kunye nokwandisa ubomi bezinto zonke.
Isifundo seMeko-Sombulula iingxaki zokuVelisa
Icandelo lase-Italiya leNovartis laya ku-I Holland kunye ne-arhente yendawo u-Vis Viva onemicimbi yokunamathela kwichiza elichasene ne-epileptic ngendlela yepilisi eqingqiweyo.
Ukuncamathela kwethebhulethi yenye yeengxaki ezixhaphakileyo xa kusenziwa ithebhulethi. Oku kwakhiwa kwegranule kwincam yobuso be-punch kubangela ixesha lokucinezelwa kwethebhulethi kunye nokucutha ukuphuma kwethebhulethi. Inefuthe elibi kwinkangeleko yethebhulethi kwaye ihlala ikhokelela ekususweni kwenkqubo yokusetyenziswa kwethebhulethi kwimveliso yokucoca kunye nokulungisa rhoqo, njengoko kuye kwenzeka kuNovartis.